हजुरबाले दसैं टीका लगाइदिँदै भन्नुभयो- प्रभु येशुले तेरो सधैँ रक्षा गर्नेछन् - सफलताका सुत्रहरु
Home/रोचक समाचार/हजुरबाले दसैं टीका लगाइदिँदै भन्नुभयो- प्रभु येशुले तेरो सधैँ रक्षा गर्नेछन्
२ मंसिर २०७५, आईतवार ०८:४८
‘प्रभुसँग मागेर, प्रभुलाई भनेर जे गर्दा पनि हुन्छ बाबु,’ हजुरबाले भन्नुभयो, ‘टीकाको दिन बिहानै प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ। आज टीका हो। घरमा पाहुना आउनुहुन्छ। हामीलाई माफ गर्नुहोला भनेँ। पहिलेदेखिको चलन हो, टीका लगाउँछु र लगाइदिन्छु भनेँ।’
कति ठाउँमा क्रिश्चियन भन्दा गाउँलेले दुर्व्यवहार गर्ने, अर्मपर्ममा नबोलाउने, एक्ल्याउने र उस्तै परे भौतिक आक्रमण समेत भएछ। त्यसैले आजभोलि ‘सर मिस’ले क्रिश्चियन नभनेर ‘विश्वासी’ भन्ने रहेछन्। अझ ‘सच्चाई धर्म’ भन्दै बाइबल बाँड्दै हिँड्दा रहेछन्।
हजुरबाका ‘सरमिस’ मध्ये एक कमला थापालाई पछि पोखरामा भेटेको थिएँ। उनले दोलखा, उदयपुर, डोल्पा, पर्वतमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारकमाथि भएको कुटपिटका समाचार मलाई देखाउँदै भनेकी थिइन्, ‘आफ्नो आस्था मान्ने र त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार जति हिन्दू धर्मावलम्बीलाई छ, उति नै क्रिश्चियन मान्नेलाई पनि छ। मुस्लिम, बौद्धमार्गी सबैलाई छ। हामीले त्यही गरेका हौं। जबरजस्ति पो गर्न भएन। हाम्रा कुरा सुनेर कोही क्रिश्चियन बन्छ भने हामीलाई किन दुर्व्यवहार गर्ने?’
हजुरबा-आमाले आफूहरूलाई ‘विश्वासी’ भनेको यही भएर रहेछ।
टीकाको दिन आफन्तका घर चहार्दै सकियो। भोलिपल्ट गाउँ छाड्ने योजना थियो। तर कूलमा पसेको ‘क्रिश्चियानिटी’ का बारेमा बुझ्न मन लाग्यो। सहर पस्ने दिन सारेँ।
वर्ष दिनअघि गाउँमा ‘संगति घर’ बनेको रहेछ। हजुरआमा पनि हजुरबासँगै हरेक शनिबार चर्च जानु हुँदोरहेछ।
‘जति लामा धामी लाउँदा पनि भएन, ओखतिले पनि छोएन,’ पूर्णमायाले भनिन्, ‘विश्वासमा लागेपछि निको भए जस्तो भएको छ। रोग उपचार हुन्छ भनेरै क्रिश्चियन धर्म अँगालेको उनले बताइन्।
क्रिश्चियन धर्ममा लागेपछि रोग निको हुन्छ र जातभात केही हुँदैन भनेर धर्म परिवर्तन हुनेहरू गाउँमा अरु पनि भेटिए। धर्म प्रचारकहरूले ‘विश्वासी/सच्चाई धर्म’ मा लागेपछि जाँड-रक्सी खान पाइँदैन भन्ने रहेछन्। त्यसले गर्दा पुरुषका जाँड-रक्सी खाने बानीले हैरान भएका महिलाहरू पनि आफ्ना परिवारसहित चर्चमा हिँड्ने बानी परेका रहेछन्।
‘केको पैसा दिने हो? हामीले उल्टो हरेक शनिबार आफूले सकेअनुसार १०/२० रुपैयाँ जम्मा गरेर सरमिसलाई दिन्छौं,’ तुलसीले जवाफ दिइन्।
‘उनलाई साथ चाहिएको थियो, यो धर्मले दियो’ मैले अर्थ लगाएँ।
(दीपक भट्टराईले लेखेको यो समाचार हामीले सेतोपाटीबाट साभार गरेका हौं ।)
व्यवहार सम्वन्धी केही ज्ञानवर्दक भनाइहरु
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०२ गते आइतबार
‘भ्यालेन्टाइन डे’ स्पेशल: प्रेमि , प्रेमिकालाई गुलाब कसरी दिने ?
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:३०
बादर युवती संग यसरी खेलेपछि भयो यस्तो रमाइलो पुरा हेर्नुस
२० असार २०७५, बुधबार २०:४७
गरुण पुराण अनुसार यी १० काम गर्नेलाई नर्क जानबाट कसैले रोक्दैन
४ पुष २०७४, मंगलवार २१:५३
प्रियंकाले घोषणा गरिन आफ्नै रेट
२३ पुष २०७४, आईतवार १४:३७
३ भाद्र २०७४, शनिबार ११:४२
राशिफल / आश्विन ०७ गते शनिबार २०७४
६ आश्विन २०७४, शुक्रबार २२:१५
आजको आफ्नो भाग्य आफै हेर्नुहोस् । राशिफल / २०७४ आश्विन २२ गते आइतबार
२२ आश्विन २०७४, आईतवार ०५:१६
जीवनमा मनन गर्नेपर्ने महत्वपूर्ण भनाईहरु
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार ०९:३९
ख्याल गर्नुहोस, सूर्य अस्ताउने समयमा भुलेर पनि नगर्नुस् यी ४ काम
९ पुष २०७४, आईतवार ०९:२५